Fetsy haingo 5 izay hanampy anao ho falifaly kokoa ao an-trano | Bezzia
Fetsy haingo 5 izay hanampy anao ho falifaly kokoa ao an-trano
Tony Torres | | an-trano
Ny dingana voalohany hahasambatra kokoa ao an-trano dia ny fanananao izany voaravaka amin'ny fomba izay mampita fandriampahalemana, firindrana ary fahasambarana aminao. Tsy maninona na avo lenta kokoa na maoderina, maoderina na raha afaka mampiasa vola kely amin'ny haingon-trano ianao, ny zava-dehibe dia ny fananan'ny tranonao izay rehetra mahasambatra anao. Misy aza ny tetika haingon-trano izay ahafahana mamadika ny trano rehetra ho tempolin'ny fandriam-pahalemana.
Ny fomba tsara indrindra ahazoana aina ao an-tranonao dia ny firavahan'izy ireo ny fomba itiavanao azy sy ny fanatontosanao amin'ny fikasihana kely, toy ny sary hosodoko sasany, tapa-doko kely misy loko tianao indrindra, lamba vitsivitsy ary koa fanaka sasany. Raha afaka miditra ao an-tranonao ianao ary mahatsapa fa misolo tena anao dia hanana ny lalana voaravaka ianao ho sambatra fatratra ao.
1 Fetsy haingo ho sambatra ao an-trano
2 Filaminana sy fahadiovana
Fetsy haingo ho sambatra ao an-trano
Tsy ny olon-drehetra no manana fanomezana haingo. Saingy tsy ilaina ny fananana trano magazine hahafahanao mahazo aina sy faly amin'izany. Mila singa vitsivitsy fotsiny ianao hahatonga anao hahatsapa ho tsara, hanome anao fiadanam-po ary hahatonga ny tranonao ho toerana mahafinaritra. Mariho ireto toro-hevitra momba ny haingon-trano manaraka ireto amin'izay ny tranonao dia toerana mahafinaritra sy toerana mety hahasambatra anao.
Singa haingon-trano izay ahazoana aina: Mampahery ny mahita lamba firakotra ahazoana mijery TV amin'ny sofa, ny sary tokana dia manampy anao haka sary an-tsaina fotoana fampiononana iray. toy ny zavamaniry anahaingoana efitrano iray, hikarakarana azy io ary hijerena azy mitombo tsikelikely, zavatra mampahazo aina ny trano izany. Eritrereto ireo singa izay mahatonga anao hahatsapa izany ary mametraka azy ireo ao an-tranonao.
Zavatra hafahafa, hafahafa ary tsy mahazatra: Ny fanananao zavatra haingo manokana dia hanampy anao ho falifaly kokoa ao an-trano. Ny mijery fotsiny dia hitondra anao amin'ny fotoana hafa, dia hanana fahatsiarovana mahafinaritra ianao miaraka amin'izy ireo fahatsapana fahasambarana mandeha ho azy.
Zavatra haingon-trano izay mahatonga anao hiandrandra: Momba ny fametrahana singa haingon-trano amin'ny faritra avo iray, izay manery anao hijery sy hijery ny faritra amin'ny fomba fahitana. Place zavamaniry lava lava na avy amin'ny valindrihana misy fanantonana amin'ny macramé, safidin'ny efamira mitsangana na zavatra haingon-trano lava.
Singa voajanahary: Ny fomba Nordic dia nandresy tamin'ny haingon-trano an-trano nandritra ny taona maro ary tsy mahagaga izany, satria mifototra amin'ny singa voajanahary ho an'ny haingon-trano rehetra. Ala kesika tsy voatsabo, kofehy voajanahary amin'ny loko tsy miandany izay mitondra fandriampahalemana, zavamaniry izay mitondra fiainana eo amin'ny toerana rehetra. Apetraho ao an-trano ireo singa voajanahary ary hahatsapa ho sambatra kokoa ianao ao.
Labozia hanazava ny alina: Ny labozia dia nanjary singa ilaina amin'ny haingon-trano. Ankoatry ny fampiasana azy ireo ho toy ny freshener an'habakabaka dia tonga lafatra izy ireo mba hanazava ny efitrano amin'ny alina. Tsy amin'ny fotoana romantika fotsiny, mijery andian-dahatsoratra rehefa miala sasatra amin'ny labozia Hanampy anao hahatsapa ho milamina kokoa sy mahazo aina ao an-trano izany.
Filaminana sy fahadiovana
Ny haingon-trano koa dia mitazona ny filaminana sy fahadiovana ao an-trano. Misy zavatra ilaina raha te hahazo aina sy sambatra ianao ao an-trano. Raiso ny singa haingon-trano izay lasa toerana fitehirizana, toy ny harona wicker, boaty misy akora natoraly na lamba ahantona. Azonao atao ny mandamina ny charger sy ny tariby izay misy foana na aiza na aiza. Ny fifehezana ny fahitalavitra sy ireo singa rehetra izay tsy manana toerana raikitra ary eo afovoany hatrany.
Alefaso isan'andro ny tranonao, ampiasao mpanadio rivotra voajanahary mba hanitra fofona araka ny itiavanao azy ary aza avela hangonina ny fanadiovana. Miaraka amin'ny fihetsika kely isan'andro toy ny amboary ny fandriana, banga, avelao tsara ny sofa sy ny ondana ary ny lakozia voaangona, afaka manana trano ianao izay hahatsapa ho milamina sy feno fahasambarana. Ankafizo ny tranonao ho tempolinao, fialofana ary toeranao eto amin'izao tontolo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Fetsy haingo 5 izay hanampy anao ho falifaly kokoa ao an-trano
Fomba fanazaran-tena hampiatoana amin'ny telefaona
Fahadiovana am-bava: Fomba fanadiovana tsara ny lela